Kuphi ukubukela Musa ukuphefumla 2 kwi-Intanethi: Iinkcukacha zokusasaza, umhla wokukhutshwa kunye nokunye malunga nokulandelayo - Inkcubeko
Kuphi ukubukela Musa ukuphefumla 2 kwi-Intanethi: Iinkcukacha zokusasaza, umhla wokukhutshwa kunye nokunye malunga nokulandelayo
Ifilimu yakwaSony ka-2016 Musa ukuphefumla yayilele kwindawo eyoyikisayo eveliswe ngumdlalo owoyikisayo uSam Raimi (naye owaziwa ngo-2004 uSpider-Man 2 udumo). Ifilimu igqithe ngaphezulu kwe- $ 157 yezigidi ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 10 yezigidi.
Musa ukuphefumla uhlolisise ibali elincomekayo lomkhosi ongaboniyo ojongana namasela amane aqhekeza indlu yakhe. Indoda eyimfama, edlalwa nguStephen Lang (we-Avatar wodumo ngo-2009), ufumana iindlela ezoyikisayo zokukhusela ikhaya lakhe kubahlaseli.
Nge-4 ka-Agasti ka-Sony, u-Sony ukhuphe i-red-band enesithintelo kwi-trailer ethi Ungaphefumli 2, ebizwa ngokuba yi-Dark AF, eyonyuse ubungqongqo ngokulandelelana. Ifilimu iya kubandakanya uNorman (igqala elingaboniyo) esebenzisa iindlela zakhe ezintsha zokusindisa inkedama encinci kwiqela labaqweqwedisi.
Musa ukuphefumla 2: Ukusasaza kunye nokukhupha iinkcukacha, ixesha lokubaleka kunye nokuphosa
Iphepha elisemthethweni le-IMDB lokungaphefumli 2 lifundeka,
Ukufihla iminyaka emininzi kwi-cabin esecaleni, uNorman Nordstrom uthathe kwaye wakhulisa intombazana encinci eyinkedama kwindlu yomlilo. Ubomi babo obuzolileyo buyaphazamiseka xa iqela labaqweqwedisi liza lithathe le ntombazana, linyanzela uNorman ukuba ashiye indawo yakhe ekhuselekileyo ukuze amsindise.
Ukukhutshwa komdlalo weqonga:
Olu luhlu luya kukhutshwa kwihlabathi liphela ukusuka nge-13 ka-Agasti, enomdla ukuba ingoLwesihlanu. Uninzi lwamazwe apho izithintelo ze-COVID ngokubhekisele ekubukeni kweqonga ziphakanyisiwe ziya kubona ukukhutshwa kwefilimu 'ngolwesiHlanu umhla we-13'. Nangona kunjalo, kwamanye amazwe, imovie iya kubakho kwiindawo zemidlalo kusuku olungaphambili, nge-12 ka-Agasti.
Umfanekiso ngeSony Pictures Entertainment
Izinto ezimnandi zenzelwe abafana zokuzalwa
Ukusukela Isony ayinalo iqonga layo lokusasaza okwangoku, istudiyo siya kuyishiya kuphela ifilimu kwiithiyetha. Ifestile yokukhupha ii-VOD kunye namaqonga okusasaza ayikaqinisekiswa.
Imuvi yakudala kaSony, uBawo kaKevin Hart, yafunyanwa ngu INetflix . Ke, iindlela ezifanayo zinokwamkelwa ukuze ungaphefumli 2 kamva.
Imovie yangaphambili Musa ukuphefumla igqityiwe ngoJane Levy's Rocky ebaleka indlu kaNorman. Nangona kunjalo, iRhafu ayibuyeli enye indlela.
Musa ukuphefumla u-2 uza kuba noStephen Lang ephinda enze indima yakhe njengeNdoda eyimfama / uNorman Nordstrom, kwaye izakubandakanya ukongezwa okutsha njengoMadelyn Grace (njengePhoenix), uBrendan Sexton III (njengoRaylan), uRocci Williams (njengoDuke) noStephanie Arcila (njengoHernandez), phakathi kwabanye.
ukunceda umhlobo ukuba aphulukane nokwahlukana
ukungaziva ngokwaneleyo kubudlelwane
ndiziva ngathi ndingumphambukeli kubudlelwane bam
iimpawu zokungavuthwa kubudlelwane
indlela yokuxelela ukuba intombi yam yangaphambili ifuna ukuba ndibuye
Ndifuna ukulila kodwa ndiyakwazi t
ukudibana nomntu okokuqala emva kokubhala umyalezo